Shweet Wallpaper — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Naro mifananidzo iwe ndamboona nokuda Trip kuti Latest Album, simuka? Zvadaro anobatirira ichi shweet Wallpaper nokuda foni yako saka unogona kuva newe nguva dzose.
Julia kutongokwizwa • Gumiguru 29, 2014 pa 9:01 ndiri • pindura
NoahClements • Mbudzi 5, 2014 pa 8:25 ndiri • pindura
Ida iyi mapikicha! Akanaka Shitter!!
Jonathan • Mbudzi 12, 2014 pa 6:50 pm • pindura
saka dood inotonhorera iri kungoita “Shweet” ;D
Nico • Mbudzi 20, 2014 pa 4:15 pm • pindura
Ndiwe akanakisa unouya kuChechi yangu Belfair Assembly yaMwari muBelfair
Jeremy Thomas • Chivabvu 14, 2016 pa 4:18 pm • pindura
Iwe uri mumwe wemakanaka rappers yenguva yese uye unonyatsondibatsira kuti ndinzwisise kurarama kuburikidza neako audiobook simuka yekutenda rwendo. P. Ini ndiri fan wako mukuru.
Mupanduki • Ndira 28, 2017 pa 3:43 pm • pindura
Albums yako inoshamisa uye bhuku rakandikomborera chaizvo.
Aj Powell • Nyamavhuvhu 5, 2019 pa 12:23 pm • pindura
Ndanga ndichitsvaga iyo inotapira yamapepa ekukunda yefoni yangu. Zvichida rwiyo rwangu rwandinoda zvachose! Zvinokurudzira kwazvo! Ndinokutendai nokuti zvose zvaunoita!